Febroary 21, 2022 Janoary 11, 2022 by Ali Quli
Androany izahay dia manolotra anao ny fampiharana faratampony amin'ny fandefasana fahitalavitra an-tserasera izay antsoina hoe Revolt.TV Apk. Betsaka ny olona any izay tsy afaka mijery fahitalavitra satria tototry ny asany izy ireo ary tsy manam-potoana hijerena fahitalavitra ao an-trano. Betsaka ny olona te-hijery fanatanjahan-tena mivantana ary maro no maniry ny havaozina amin'ny vaovao farany, ny raharaha ankehitriny, ary ny seho mivantana.
Ankehitriny miaraka amin'ity fampiharana mahafinaritra ity, afaka mijery izay tianao ianao na aiza na aiza amin'ny findainao. Azonao atao ny mandefa na inona na inona avy amin'ny vaovao mivantana ary koa ny sarimihetsika. Ity dia fampiharana tsy maintsy ampiasaina ho an'ny olona tsy afaka mijery fahitalavitra noho ny asany.
Ny mpamorona dia nanao ny fampiharana ho mora ampiasaina satria manana drafitra mora azo. Ny fampiharana dia atolotra amin'ny teny anglisy ary tena mora ny mahita izay tadiavinao. Alohan'ny rehetra dia misoratra anarana amin'ny kaontinao ianao na afaka miditra ho mpampiasa vahiny. Ao amin'ny menio dia mahazo safidy isan-karazany ianao toy ny Video Gallery, Live TV, sy ny maro hafa.
Ankehitriny dia holazaiko aminao izay hafa azonao ananana amin'ny fampiasana an'ity app ity satria tsy momba ny fahitalavitra mivantana fotsiny izany. Amin'ny fampiasana an'io dia azonao atao ny mandefa horonan-tsarimihetsika mozika sy ny tafatafa farany amin'ireo mpitendry mozika tianao indrindra. Mahazo lisitra be dia be amin'ny sarimihetsika amin'ny karazany samihafa sy ny sarin'ny modely farany ianao. Havaozina isan'andro ny lisitry ny mozika mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
izany IPTV App tsy mandoa na inona na inona amin'ny streaming an-tserasera. Maimaim-poana ny votoatiny azo ampiasaina. Ny zava-dehibe iray irin'ny rehetra amin'ny tranonkala streaming an-tserasera dia ny tokony hananany kalitaon'ny horonan-tsary tsara ho an'ny sarimihetsika farany. Izy io dia manana kalitao video tsara ho an'ny serie TV sy sarimihetsika ihany koa. Safidy tsara ho an'ireo mpampiasa izay maniry ny kalitaon'ny horonan-tsary ho an'ny sarimihetsika.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Revolt.TV APK
Fahitalavitra mivantana: Mahazo fantsona mivantana 20 mahery ho an'ny vaovao sy fanatanjahan-tena ianao. Ireo mpankafy WWE koa dia afaka mandefa ny seho isaky ny maniry amin'ny alàlan'ny fantsona WWE.
Rakikira mozika: azonao ny mozika farany avy amin'ny sarimihetsika sy rakikira vao nivoaka avy amin'ny sarimihetsika taloha koa.
Lisitry ny karazana Genres: Misy lisitra lava be ho an'ny sarimihetsika toy ny Action, Comedy, Thriller, Adventure, ary maro hafa.
Votoatin'ny fangatahana: azonao atao koa ny mitaky ireo hira sy rakikira tianao izay tsy misy.
Anaran'ny fonosana tv.revolt.android
Android Version 5.0 ary ambony
Ity dia fampiharana an'ny antoko fahatelo fa tsy fampiharana ofisialy ho an'ny fivarotana fampiharana Google. Tsy fampiharana ara-dalàna izany.
Araka ny nolazainay fa fampiharana tsy ara-dalàna ity ary maro amin'ireo mpampiasa no matahotra hampiasa fa avelao aho hiteny aminao fa tsy misy tokony hatahorana. Nampiasain'ny mpampiasa an'arivony maro tany io ary tsy mbola nisy olona nanana olana manoloana ny filaminany manokana noho io fampiharana io. Azonao atao ny mankafy ny horonan-tsarinao sy ny fahitalavitra tsy misy olana.
Ahoana ny fampidinana ny Revolt.TV Apk
Ity fampiharana ity dia tsy misy ao amin'ny fivarotana fampiharana Google fa azonao atao ny misintona azy mora foana avy amin'ilay rohy nomena etsy ambany.
Ahoana ny fametrahana ny Revolt.TV Apk
Ny fizotry ny fametrahana dia tsy dia sarotra na sarotra, mila mamela fotsiny ny fametrahana avy amin'ireo loharano tsy fantatra ianao avy amin'ny toerana fiarovana anao.
Tadiavo izao ny Apk alaina avy amin'ny fampirimana fisintomana anao ary kitiho eo amboniny
Raha vantany vao misokatra ny mpamosavy fametrahana, kitiho ny bokotra install ary miandrasa mandra-pahatapitry ny fizotrany. Ho vonona hampiasa ny App anao izao
Safidy tsara ho an'ireo tia streaming an-tserasera avy amin'ny finday avo lenta Android ity. Sintomy ny Apk ankehitriny ary mankafiza atiny maso tsy voafetra. Raha tianao ity rindrambaiko ity ary maniry bebe kokoa amin'ireo fampiharana ireo noho ny zahao Thop TV
Sokajy Apps Tags Fikomiana.TV, Revolt.TV Apk, App Revolt.TV Post Fikarohana